zawmintun၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်zawmintun's ၏ 'စိတ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မေ 28, 2015
Thaung zaw သည်zawmintun's ၏ 'သတ္တဝါတို၏ ၃၁ ဘုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ...........' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကလေးတို.ဆရာမ သည်zawmintun's ၏ 'သေတယ်ဆိုတာဘာလဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
thidahtun သည် zawmintun's၏ 'သေတယ်ဆိုတာဘာလဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည် zawmintun's၏ 'သေတယ်ဆိုတာဘာလဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည်zawmintun's ၏ 'သေတယ်ဆိုတာဘာလဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
သေ တယ်ဆိုတာ၌ သတ္တဝါ သေတာ နှင့် ကိလေသာ သေတာဟှု၍နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကိလေသာ သေတာက အာရုံလှမ်းပြုတာပဲ။ သတ္တဝါသေရင်လဲ အာရုံလှမ်းပြုတာပဲ၊ အာရုံလှမ်းတာခြင်းတှုပေမယ့် အသေခြင်းမှာ မတှုကြဘှုး။မတှုပုံမှာ မတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခါနီးမှာ အာရုံလှမ်းတာပဲ ဂေါတြဘူဥာဏ်( ပုထုဇဉ် အနွယ်ကိုဖြတ်၍ အရိယာ အနွယ်ကိုဆက်ပေးတာ) ကသညာပေးတော နိဗွ့န်ကို မတ်က အာရုံလှမ်းပြီး နိဗွ့ာန်မှာ တွယ်စရာမရှိ၍ ဒီဘက်ပြန်လိုက်တော မတ်က ကိလေသာကိုသတ်လိုက်တော ကိလေသာ အမြစ်ပြတ်သေသွားတယ်။လောက သတ္တဝါတွေ သေခါနီးမှာ နောက်ဘဝ အာရုံလှမ်းတယ်၊ နောက်ဘဝမှာ တွယ်စရာရှိ၍ တွယ်တော…See More
zawmintun သည် မူကြိုဆရာ's၏ 'မဂ္ဂင် ငါးပါးနှင့်ရှစ်ပါး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
zawmintun သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'မဂ္ဂင် ငါးပါးနှင့်ရှစ်ပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Maung Lwin သည်zawmintun's ၏ 'သတ္တဝါတို၏ ၃၁ ဘုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ...........' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
zawmintun သည်ဉာဏ်လင်းမြို့'s ၏ '"ကမ္ဘာ အနှံ့ ဓမ္မအောင်လံစိုက်ထူခဲ့သော ကမ္ဘာ့ ၀ိပဿနာ တရားပြဆရာ ကြီး ဦးဂိုအင်ကာ"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
aung aung soe သည် zawmintun's၏ 'သတ္တဝါတို၏ ၃၁ ဘုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ...........'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
khin nu သည် zawmintun's၏ 'သတ္တဝါတို၏ ၃၁ ဘုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ...........'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"လျှောက်ရမည့်လမ်းကိုညွှန်ပြပေးသလိုပါပဲ....ရေးသုရော တင်သူရော ကျေးဇူးတင်ပါသည်.....လောကီလောကုတ္တရာ မင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ..........."
သတ္တဝါတို၏ ၃၁ ဘုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ...........
သတ္တဝါတိုမျိုးစုံရှိတဲ့ ၃၁ ဘုံအကြောင်း ဘုရားဟောထားတဲ့ ကျမ်းဂန် သုတ်သန်တွေတော်တော်များများမှာပါရှိပါတယ်..သိုသော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအချို့ ချို့ ပုဂိုလ်တွေက ၃၁ ဘုံဆိုတာကိုငြင်းပယ်ချင်ကြတယ်..သှုတိုငြင်းပယ်ခြင်းအကြောင်းက ၃၁ ဘုံမရှိဘှုးဆိုပြီးတော ငြင်းပယ်ကြတယ်..ဘာလိုလဲ ဆိုတောမမြင်ရလို…See More
Daw Nwe Nwe Win သည် zawmintun's၏ 'မောဟ အကြောင်း...'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မောဟ ရှိနေသမျှ အမှန်မသိမှုတို စိတ်မငြိမ်မသက်မှုတို သံသယတို စိတ်လေလွင့်မှုတို ဒါတွေဟာရှင်သန်နေမှာဘဲ နောက်ဆုံး လောဘ ရှင်သန်ဖိုလဲအထောက်အကှုဖြစ်နေမှာဘဲ ဒေါသ ရှင်သန်ဖိုလဲ အထောက်အကှုဖြစ်နေမှာဘဲ............။။။ (အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဆရာတော်) thanks"
Thuthuye သည်zawmintun's ၏ 'မောဟ အကြောင်း...' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
10:01pm အချိန်စက်တင်ဘာ 1, 2013, တွင် ခင်သက်ဆွေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:01am အချိန်မေ 21, 2013, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:49am အချိန်မေ 21, 2013, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ခုတလော အလုပ်များပြီး ဗုဒ္ဓကမ္ဘာထဲးကိုမရောက်တာကြာလို နောက်ကြပြီးမှ သိရတဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ပါရှင်...နေကောင်းပါတယ် ဘဝပေးတာဝန်တွေကများလွန်တော့ အချိန်က မလောက်အောင်ပါဘဲ့ရှင် သတိတရမေးလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...ရီင်လန်းချမ်းမြေနှိင်ပါစေ...
4:43am အချိန်မေ 21, 2013, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
နေကောင်းပါတယ်ရှင် ..ခုတလေား ဗုဒ္ဓကမ္ဘာထဲးကို မရောက်တာကြာလို...နောက်ကြပြီးမှသိရတဲ့အတွက်ခွင့်လွင်ံပါနော်...ပျော်ရွင်ချမ်းမြေနှိင်ပါစေရှင်..
12:36am အချိန်မတ် 18, 2013, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:33am အချိန်မတ် 18, 2013, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:38am အချိန်မတ် 17, 2013, တွင် ma nge hlaing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 7, 2013 တွင်9:26pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments3Likes
သေ တယ်ဆိုတာ၌ သတ္တဝါ သေတာ နှင့် ကိလေသာ သေတာဟှု၍နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ကိလေသာ သေတာက အာရုံလှမ်းပြုတာပဲ။ သတ္တဝါသေရင်လဲ အာရုံလှမ်းပြုတာပဲ၊
အာရုံလှမ်းတာခြင်းတှုပေမယ့် အသေခြင်းမှာ မတှုကြဘှုး။
မတှုပုံမှာ မတ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခါနီးမှာ အာရုံလှမ်းတာပဲ ဂေါတြဘူဥာဏ်( ပုထုဇဉ် အနွယ်ကိုဖြတ်၍ အရိယာ အနွယ်ကိုဆက်ပေးတာ) ကသညာပေးတော နိဗွ့န်ကို မတ်က အာရုံလှမ်းပြီး နိဗွ့ာန်မှာ တွယ်စရာမရှိ၍ ဒီဘက်ပြန်လိုက်တော မတ်က ကိလေသာကိုသတ်လိုက်တော ကိလေသာ အမြစ်ပြတ်သေသွားတယ်။
လောက သတ္တဝါတွေ သေခါနီးမှာ နောက်ဘဝ အာရုံလှမ်းတယ်၊…
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 6, 2013 တွင်1:04am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments2Likes
သတ္တဝါတိုမျိုးစုံရှိတဲ့ ၃၁ ဘုံအကြောင်း ဘုရားဟောထားတဲ့ ကျမ်းဂန် သုတ်သန်တွေတော်တော်များများမှာပါရှိပါတယ်..သိုသော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအချို့ ချို့ ပုဂိုလ်တွေက ၃၁ ဘုံဆိုတာကိုငြင်းပယ်ချင်ကြတယ်..သှုတိုငြင်းပယ်ခြင်းအကြောင်းက ၃၁ ဘုံမရှိဘှုးဆိုပြီးတော ငြင်းပယ်ကြတယ်..ဘာလိုလဲ ဆိုတောမမြင်ရလို…
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 1, 2013 တွင်11:50pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
လောဘ ဖြစ်တာလဲ လှုတွေကပြောတတ်ကြတယ် ဒေါသ ဖြစ်တာလဲလှုတွေကပြောတတ်ကြတယ်။ မောဟ ဖြစ်တာကျတော ဘယ်လိုပြောမှာလဲ မောဟ ဖြစ်တာကျတော လုပ်သင့်တာကိုမလုပ်သင့်ဘှုးလိုထင်တယ် မလုပ်သင့်တာကို လုပ်သင့်တယ်လိုထင်တယ် အမှားကိုအမှန်ထင်နေတယ် အမှန်ကိုအမှားထင်နေတယ် မောဟ ရဲ့သဘောက အဲဒီလို...မောဟ ကမသိတာမဟုတ်ဘှုး အမှန်ကိုမသိတာ မောဟ လိုခေါ်ပါတယ်..မသိတာမဟုတ်ဘှုးသိတယ် သိတာ အမှားကိုသိတာ အမှန်မသိဘဲနဲ အမှားသိနေတာ မောဟ ဘဲဒါကိုတွေးဝေတဲတယ်လိုပြောတာ အမှန်မသိဘဲ အမှားသိနေတာ မောဟ။။။
သိုသော် မသိဘှုးဆိုတာ အကုန်မသိတာမဟုတ်ဘှုး သဘာဝ…
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 8, 2013 တွင်11:21pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments2Likes
မျက်ကန်းတစ်ယောက်သည် မိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိုးပေါက်တွေကို နေစဉ်နဲ့ အမျှ အချိန်နဲ့အမျှ ရေလောင်းဖြည့်ပါသည် ဘယ်တောပြည့်မှာပါမည်နည်း မျက်စီက မမြင်တောအိုးပေါက်မန်းမသိ အချိန်ရှိတိုင်း ဒီအိုးပေါက်ခြောက်လုံးကိုပဲ ရေဖြည့်နေပါသည်
ထိုအတှုပဲ လှုသားတိုသည်လဲ မျက်စီ နား နှာ လျာ ကိုယ် စိတ် ဆိုတဲ့ ဒီအိုးပေါက်ခြောက်လုံးကို…
2. သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း။
4. သေခြင်းအကြောင်း ၄ မျိုး။
5. မိသားစု တစ်စုလုံး ငြိမ်းအေးလိုလျှင်။
6. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် အတ္ထဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
7. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် တိဿမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
9. နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ မြေအမျိုးအစား။
11. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
12. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ဓမ္မဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
14. ဘ၀ကိုကျော်ဖြတ်တဲ့အခါ မိမိကိုယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ
15. ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀လှအောင်ပြင်ချင်စိတ်။
16. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ဆွေကောင်းများ။
17. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ပိယဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
18. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် သုဇာတမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'သေခြင်းအကြောင်း ၄ မျိုး။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် thein wai's၏ 'ထိုသူပညာရှိ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။